Breaking news-Cali Khaliif oo ku dhawaaqay dagaal kadhan ah Puntland sheegayna in Farmajo uusan matalin beeshiisa. – Puntland News.net
Home 2017 February 12 Somali News Breaking news-Cali Khaliif oo ku dhawaaqay dagaal kadhan ah Puntland sheegayna in Farmajo uusan matalin beeshiisa.
Breaking news-Cali Khaliif oo ku dhawaaqay dagaal kadhan ah Puntland sheegayna in Farmajo uusan matalin beeshiisa.
February 12, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 2
Maamulka Khaatuma ayaa maamulka Puntland uga digay in uu sii wado xiisada ka taagan Magaalada Buuhoodle ee gobolka Togdheer.
Ciidamada Hubeysan ee ku sugan Magaalada Buuhoodle ee dhawaan u diiday Cali Khaliif Galeyr in uu ka duulo garoonka diyaaradaha Buuhoodle ayuu sheegay in ay taageerayso Puntland.
Madaxweynaha Maamulka Khaatuma ayaa sheegay in shacabka kunool degaanada Khaatuma ay kasoo horjeedaan maamulka Puntland , islamarkaana aysan ku raaci doonin Aftarsiimo waa sida uu hadalka u dhigaye.
Puntland ayuu sheegay in meel ay uga soo jeedsan doonaan, oo uu kala jeedo iney la dagaallami doonaan maamulkaasi.
Sidoo kale waxaa Muuqata in Khaatuma ay u weecatay dhanka Somaliland , waxaana uu sidoo kale Tilmaamay in Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Farmaajo uusan matalin dadka kunool degaanada maamulka Khaatuma.
2 thoughts on “Breaking news-Cali Khaliif oo ku dhawaaqay dagaal kadhan ah Puntland sheegayna in Farmajo uusan matalin beeshiisa.”
Nuh Mohamed February 12, 2017 at 12:35 pm · Edit
War Caliyow walaal miyaadan Allah ka yaabeyn? Miyaadan ka warheyn Dunida aynu guudkeeda duljoogno in aan cidina ku waareyn? War miyaadan arkeyn, kuwii adiga maamul ahaan saa sareeyey oo uu Cada Muuse u dambeeyey iyo kuwii kaa hooeeyey intaba in badane in aduunkaan Allah uu ka kixeeyey oo ay dulka hoose joogaan? War walaal Cumriga aan jiro bogii aan akhriyaaba Dagaalunbaad oogeysey,,war Soomaali inbadan oo adiga Cumrigaada ah oo qorax sii dhaceysa ahayaa la haray, wax aad ka naxeysaan Aduun iyo Aakhiro midna aney-jirin walaal. Soomali wey tashatay, Dibad iyo Gudaha intaba Cali, Qabiil marbuu idiin shaqeyey Cali, wax la-idinka dhxlay oon dhibaato iyo baaba iyo dib u dhac aheyne ma jiraan. Car ha lasoo waa kaas ha lasoo helo Qabiil qabiilada Soomileed ka mid ah oo maanta dhahaya kuwii horsedka inoo ahaa waan ku diirsanay,(Ma jiro) Cali waa kuu kaligaa..Nuh
Cumar February 12, 2017 at 5:09 pm · Edit
Somaliland danteeda ku jirta Puntland oo nabad ah weliba dhaqaalaxumada Puntland uma wanaagsana Somaliland sida warka ku helay marka ma filayo in Puntland dhib kale ku soo kordhin rabaan. Hadi dagaal ay la galaan Puntland dantooda ku jirto marar badan ay si fuduud dagaal ku qaadi lahayeen ayaa jiray sida marka Puntland iyo Galmudig dagaal ka dhexeeyay.
Galayr Buhoodle in keligiis maamula raba laakin awood Puntland dagaal ku qaado ma lahaan. Galayr Buhoodle waa laga diiday ma ahaan in Puntland dagal siyaaso la galo ha ka fariisto ummada.